Nin soo xirtay dharka Dumarka oo la qabtay - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Nin soo xirtay dharka Dumarka oo la qabtay
July 12, 2020 admin687
Ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa ay howlgal qorsheysan ka sameeyeen xaafado ka tirsan Degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Ciidamada dowladda ayaa howlgalka intii uu socday waxaa ay ku soo qabteen Nin soo xirtay dharka ay xirtaan Dumarka, kaasi oo la sheegay in looga shakisan yahay inuu kamid yahay Al-shabaab.
Saraakiisha amniga Degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ay sheegeen in Ninkaas howlgalka lagu qabtay haatan lagu wado baaritaano kala duwan, isla markaana xogtiisa oo dhameystiran dib laga soo gudbin doono.
Sawirro laga soo qaaday Ninkaas soo xirtay dharka dumarka laguna faafiyay baraha Bulshada ayaa waxaa lagu arkayay, isaga oo xiran xijaab, sidoo kalena qeybaha hoose uu ka xiran yahay Surwaal, lugahana laga xiray.
Si kastaba Degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa dhowr weerar jeer weeraro kala duwan oo isugu jiray mid toos ah iyo mid loo adeegsaday Madaafiic ku qaaday dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab.
Isha: Dalsan Radio
Madaxwayne Waare oo Shaaciyay Caqabadaha haysta Maamulkiisa
Dowladda Soomaaliya oo digniin ka soo saartay Bad Xiranka